Okwu nke Haile Selassie na AU na 1963 na 64 - Afrikhepri Fondation
Okwu Haile Selassie kwuru na AU na 1963 na 64
Na-agụ: 7 min
IPuku afọ ole na ole gara aga, mmepeanya dị na kọntinent a. Ndị a adịtụghị ala karịa ndị ahụ dị na mpaghara ndị ọzọ. Ndị Africa nwere onwe ha na ndọrọ ndọrọ ọchịchị ma nweere onwe ha. Ha nwere usoro nke ọha nke ha, ọdịbendị ha bụkwa nke ụmụ amaala. Oge ochichi ndị ọchịchị gwụchara na agbụ na ohu nke ụwa anyị. Ndi mmadu anyi, ndi nwere obi uto ma nwekwaa onwe ha, bu ohu na mmechuihu. Taa, Africa esitela n'ọchịchịrị a.
Emeela ka amụrụ ya dịka kọntinent nwere onwe ya, yana ndị Afrịka dịka ụmụ nwoke nwere onwe ha. Iyịp oro ẹduọkde ye ndutụhọ oro ẹkekụtde ẹkedi mfọnn̄kan ubiere oro ẹnọde nnyịn ifụre ye edidianakiet. Ihe obula ebe nzute ayi, obu site na nkwanye ugwu ka anyi gecheta ndi Africa nile ndi juru inabata ikpe nke ndi colonial na ndi alaeze ukwu mara ha, ndi nile nwere olile anya, n’enweghi obi abua, oge kachasị njọ, n'Africa enwereghị onwe ya site na ịgba ọchịchị, akụ na ụba na mmụọ.
Ọtụtụ n’ime ha etinyebeghị ụkwụ na kọntinent a. Ndị ọzọ, na Kama nke ahụ, amụrụ ha ma nwụọ ebe ahụ. Anyị ezukọtara ebe a ịtọ ntọala maka ịdị n'otu nke Africa. Ya mere, anyi aghaghi ikwenye na ngwa nke bu ihe ndabere maka ogha n’iru nke uwa a n’udo, nkweko na idi n’otu. (…)
Nzukọ a enweghị ike ịkwụsị ma ọ bụrụ na ịnweghị otu Charter Africa. Ọ bụrụ na anyị ekwe ka nchegbu maka ọdịmma onwe anyị na ebumnuche na-enweghị isi na-eduzi anyị, ọ bụrụ na anyị ejiri nkwenkwe anyị maka uru dị mkpụmkpụ, onye ga-atụkwasị obi n'okwu anyị, onye ga-ekwenye na achọghị ọdịmma onwe anyị naanị? Anyị ga-eme ka a mata echiche anyị banyere nnukwu nsogbu ndị metụtara ụwa, jiri obi ike na ezi obi na-ekwu ihe bụ. (…)
Omume anyị na omume anyị ekwesịghị ịbụ nke a na-enyo enyo. Ka anyị kwekọọ na nkwenkwe anyị ka ha wee fee ma sọpụrụ anyị. (…)
Anyị kpebisiri ike na mkpochapụ ịkpa ókè agbụrụ na mpaghara anyị. (…) Discriminationkpa oke agbụrụ bụ ihe na - adịghị mma n'ikike mmụọ na nke ime mmụọ anyị lụrụ ọgụ maka. Ọ bụkwa ngọnarị nke ụdị mmụọ na nsọpụrụ nke Africa anyị guzobere site na mgba anyị. Icheta ikpe na-ezighị ezi ndị e mere n'oge gara aga ekwesịghị ime ka anyị leghara nsogbu ndị siri ike dị n'ihu anyị anya. Anyị ga-ebi n'udo na ndị anyị chịburu. Ka anyị nwere onwe anyị pụọ na recrimition na ilu. Ka anyị hapụ ihe efu nke mmegwara na imegwara. Ka anyị tufuo mmetụta niile nke ịkpọasị nke ga - emebi mkpụrụ obi anyị na nsi.
obi anyị. Ka anyị mee dịka o kwesiri ugwu, nke anyị na-azọrọ n'onwe anyị dị ka ndị Africa, na-anya isi maka agwa anyị, ọdịiche anyị na ikike anyị. Anyị maara na ọdịiche dị n’etiti anyị. Ndị Africa nwere ọdịbendị dị iche iche, ụkpụrụ a kapịrị ọnụ, njirimara ụfọdụ. Mana anyị makwaara, na ebe a anyị nwere ihe atụ, na enwere ike ịnweta ịdị n'otu n'etiti ụmụ nwoke sitere n'ọtụtụ dịgasị iche, na esemokwu nke agbụrụ, okpukpe, ọdịnala, ọdịnala, abụghị ihe mgbochi a na-apụghị imeri emeri maka njikọ nke ndị mmadụ.
Akụkọ ihe mere eme na-akuziri anyị na ịdị n’otu bụ ike ma na-akpọ anyị oku ka anyị hapụ ọdịiche dị n’etiti anyị, imeri ya, n’ịchọ ebum n’uche, ibuso ndị agha anyị ọnụ, n’ụzọ nke ezi nwanne na ịdị n’otu. Afrika. Ihe anyi choro bu otu nzuko Afrika nke Afrika ga esi mee ka onu mmadu. Anyị chọrọ ka anyị nwee amamihe, ikpe na mmụọ nsọ iji jigide ntụkwasị obi nke ndị anyị na mba anyị bụ ndị nyefere akaraka n'aka anyị.
“Disdọ aka ná ntị nke uche bụ otu n'ime ihe na-eme ka mmadụ nwee ezigbo ụkpụrụ omume ọma, meekwa ka o sie ike ime mmụọ. N'ezie, mahadum, nke a na-ewere n'akụkụ ya niile, bụ n'ezie ọrụ mmụọ nke, na mgbakwunye na ihe ọmụma na ọzụzụ nke ọ na-enyefe, na-eduzi ụmụ akwụkwọ ahụ ibi ndụ amamihe karịa ma nwee nnukwu mmetụta maka ibu ọrụ dị na ndụ. . Obi siri anyị ike na ụlọ ọrụ ndị a nke ga-ehiwe mahadum ugbu a, a ga-agbatị ma mepee emepe, ka ọnụọgụ ndị ọkachamara nke Etiopia ga-aga n'ihu na-eto. "
Omume nke omume “Onweghi onye nwere ike ileghara ịdị mkpa nke ime mmụọ na usoro mmụta a anya. Agụmakwụkwọ na teknụzụ ga-azụ site n'okwukwe na Chineke, nkwanye ùgwù maka mmadụ na nkwanye ùgwù maka echiche nke mmụọ. Enweghi njigide ozo kwesiri ntukwasi obi maka akwukwo, ndu anyi, na omume ndi mmadu, ma ndi ikpea gha aghaghi ya na nkuzi nke Chineke na ihe kachasi nma na nghota nke mmadu.
Ọrụ ndu ndị emepụtara ebe a sitere n'ike mmụọ nsọ na ụkpụrụ omume dị mkpa nke nkuzi okpukpe anyị kemgbe ọtụtụ narị afọ. Oge anyị bụ oge dị oke egwu nke mba dị iche iche na-ebuso mba dị iche iche agha. Esemokwu na-abawanye na ọdachi ga-ekwe omume n'oge ọ bụla. The anya na-ebelata. Udo na ndụ na-eyi egwu site na esemokwu na nghọtahie. Ọ bụ oge taa ka ezi okwukwe nke ịbụ onye ikwu mmadụ na Chineke bụ ntọala nke mgbalị mmadụ niile maka iwulite onwe ya na ntuzi aka ya, ihe ndabere nke nghọta, imekọ ihe ọnụ na udo. ”
Okwu nke Haile Selassie 1er, 4 oct 1964
“Ọ bụrụhaala na nkà ihe ọmụma, nke na-ewere na otu agbụrụ ka nke ọzọ mma na nke ọzọ dị obere, abụghị nke a ga-emenye kpamkpam ma gbahapụ kpamkpam. Ọ bụrụhaala na enwere ụmụ amaala nke mbụ na nke abụọ na mba. Ọ bụrụhaala na agba nke akpụkpọ nwoke nwere ihe ọ pụtara karịa nke anya ya. Ọ bụrụhaala na ikike dịịrị mmadụ agaghị abụ nke e kwere nkwa n'otu n'otu nye onye ọ bụla na-enweghị ọdịiche agbụrụ. Ruo ụbọchị ahụ ga-abịa, nrọ nke udo na-adịgide adịgide, ụmụ amaala ụwa na ọchịchị nke omume mba ụwa ga-anọgide na-adị n'echiche efu, na-achụso mana ọ nweghị. Ọ bụrụhaala na ndị ọchịchị na-adịghị mma na ndị na-asọ oyi nke na-ejide ụmụnna anyị n'Africa n'agbụ obi ọjọọ agaghị akwatu ma bibie. Ọ bụrụhaala na ekwe ekwe, ajọ mbunobi na ọdịmma onwe onye, ​​agaghị enwe nghọta, ndidi na ihe ọma dochie ya. Ọ bụrụhaala na ụmụnne ndị Africa anaghị ebili ma kwuo okwu dị ka ndị nweere onwe ha nhata n’anya mmadụ niile ka ha si ele eluigwe; Ruo ụbọchị ahụ ga-abịa, mmadụ agaghị ama udo. Anyị ndị Africa ga-alụ ọgụ ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa na anyị maara na anyị ga-emeri, n'ihi na anyị tụkwasịrị obi na mmeri nke ihe ọma na ihe ọjọọ. Ndabere nke ịkpa ókè agbụrụ na colonialism abụwo mgbe niile akụ na ụba na ọ bụ site na ngwa agha na anyị ga-emeri ya. N'isochi amuma ndi emere na ogbako Addis Ababa, ndi isi ochichi nke Afrika ewerela otutu usoro onodu aku na uba nke, oburu na ndi otu nile nke United Nations nakweere, ga agbanwe ngwa ngwa. A na m arịọ taa ka mba ọ bụla nọchitere anya ya raara onwe ya nye ụkpụrụ ndị edepụtara na akwụkwọ iwu ahụ ma na-agbaso usoro ndị a. Anyị ga-eme ihe mgbe oge ruru. Ọ bụrụhaala na ohere dapụta iji mee nrụgide ndị a ziri ezi ka oge wee ghara ịgwụ anyị ma mee ka anyị nwee usoro obi ụtọ ndị na-adịchaghị mma. N'oge ndị a, mba ndị dị ukwuu n'ụwa a ga-eme nke ọma icheta na ọbụnadị akara aka ha adịghị n'aka ha kpamkpam. Udo choro ijiko aka n'otu n'otu. Ònye nwere ike ịkọwa ihe ọkụkụ nwere ike ime ka ntụ ahụ ghara ịdị? Maka onye ọ bụla n’ime anyị osisi ahụ bụ otu, ndụ ma ọ bụ ọnwụ, anyị niile chọrọ ibi, anyị niile na-achọ, ụwa ebe ndị mmadụ nwere onwe ha n’ibu ibu nke amaghị ihe, ụbịam, agụụ na Ọrịa na ọdachi kwesịrị ịdakwasị anyị niile ga-eme ọsọ ọsọ iji gbanahụ mmiri ozuzo na-egbu egbu. Nsogbu ndị anyị na-enwe taa bụcha nha anya, enwetụbeghị ụdị ya. Ha enweghị ihe ha mere na ahụmịhe mmadụ. Menmụ nwoke na-achọ ụkpụrụ na ihe ngwọta na peeji nke akụkọ ntolite, mana ọ dịghị nke ọ bụla. Nke a bụ ihe ịma aka kasịnụ. Ebee ka anyị ga-achọ maka nzọpụta anyị? Ebee ka anyị ga-achọ azịza nke ajụjụ ndị a na-ajụbeghị. Nke a bụ ihe ịma aka kasịnụ. Ebee ka anyị ga-achọ azịza nke ajụjụ ndị a na-ajụbeghị? Anyị ga-ebu ụzọ chigharịkwuru Chineke Pụrụ Ime Ihe Niile, bụ onye mere ka mmadụ karịa anụmanụ wee nye ya ọgụgụ isi na ọgụgụ isi, anyị ga-enwe okwukwe na ya, na ọ naghị adala mba ma ghara ikwe ka anyi bibie mmadu o kere n’onyinyo ya. Anyị aghaghị ile anya n'ime onwe anyị ọbụna n'ime omimi nke mkpụrụ obi anyị. Anyị ga-abụrịrị ihe anyị na-adịbeghị, ihe agụmakwụkwọ anyị, ahụmịhe anyị na gburugburu ebe obibi anyị kwadebere nke ọma maka ya. Anyi aghaghi ibu karia ihe anyi noo, nwee obi ike, nwee uche buru ibu, imeghe ihe.
Eze ikpe ikpe nke ikpeazụ nke eze: Haïlé Sélassié nke Etiopia
3 ọhụrụ site na .38,00 XNUMX
7 jiri site na € 24,78
Zụta € 38,00
Emelitere ikpeazụ na November 23, 2020 6:57 am
Ozizi nke Wayne Dyer (Akwụkwọ)
Ndụ anwansi mmadụ - Annie Besant (PDF)
New Malcom X University nke Medical and Health Sciences na-eme na Chicago